Villa Somalia | Voice Of Somalia
Category Archives: Villa Somalia
Yididiilo Been ah.‏ Qore- Idiris Axmed Dooxajoog
Bulshadu waa la hogaamiyayaal oo hagayaasha dadka ayaa horumar ama dib u dhac u kala horseeda dadkooda , Hadaad aragto bulsho ku nagaatay goob mar hore dhigeeda oo ah dadyoow kale oo dunida ku nooli ka hayaameen looguna yeero dad dambeeya oo noloshoodu ciriiri ku jiro waxaa iska leh sababta hogaamiyayaasha .
Bulshada Soomaaliyeed waxay ku nooshahay nolol dhibaatadu dhex ceegaagto , nolosha dadka Soomaaliyeed waa tu adag , waxaan jirin dawlad dadkeeda adeeg siisa , Sida kala xukminta dhexdooda dhibaatooyinka ka dhaca oo si cadaalad ah loogu kala gar naqo , sugida amniga dadka oo ah ka hor istaaga iswaxyeelaynta dhexdooda ah iyo ka ilaalinta cadoow dibadeed , Xalinta baahi bulsheedyada ay la daalaa dhacayaa danyarta oo ah badanka Bulshada IQK oo dawlad u qabato dadkeeda .
Dalka Soomaaliya waa mid dib dhacsan si guud Dadka Soomaaliyeed waxay qabaan baahi dawladeed , dawlad la’aanta waxaa keenay damaca siyaasigi danaystaha ahaa ee dumiyeey dawladnimadi , ku isku macangagiya iyo mid ka marooqso maamulka usoo miciya listay .
Ku kala tagi wadaagi dawladnimada iyo dib ugu noqoshadi noloshi hore ee dawlad li’ jirka waxaa laga dhaxlay nolosha aynu garanayno ee marba marka ka sii dambaysa sii adkaanaysa .
Ka sheegashada nolol xumaanta dalka ka jirta dadka Soomaaliyeed way kuu tilmaamayaan dhamaantood , waxayse eedayn usoo jeedinayaan dad kale oo Soomaaliyeed oo iyaga la mid ah dhibkuna u haysto si isku mid ah .
Dawlad la’aanta kuwaas ayaa u sabab ah iyo kooxdaas ayaa dawlad diid ahi waa mid dadka Soomaaliyeed intooda xaqiiqdu ka diimoon tahay ee siyaasiga u hayinsan reer hebelnimada aaminsani ay qabaan .
Taas ( Eedaynta) Dhigeeda waxay ku hima-gashan yihiin yididiilooyin been ah oo uu ugu baaqay siyaasi si koox odayeedsan u haysta caqliyadooda ayna u yihiin adoomo isaga ayidsan ase itaal daran oo nolol abaaraysan ku nool .
Aaminaada Yididiilada Beenta ah ee siyaasigu suuq gaysto waa tan bulshadan hoday , waa isaga oo ku leh annigu waan dhanaa Soomaalida soohdintaas dagan ee Koox odayeedkaas ah , Taraarkana (Mustaqbalka) waxaa innoo soo socda horumar waxaase hor taagan reer Hebelkaas oo inna Nebec .
Waa Tan Yididiiladi beenta ahayd noqotay tu joogtaysan , dhibaatadina ka soo rayn daaye ka sii dar ay maalinba maalinta ka dambaysa horay ugu sii soconayso .
Yididiilada Beenta ahi dhowaanaha ma bilaaban ee waa mid ku lamaansan Sooyaalka Soomaalida , dhaqanka Soomaalidu kol hadii uu yahay mid samaha dhinac marsan , hogaamiyayaasha siyaasadu waxay adeegsadaan QABYAALADA , waxay kala qaybiyaan bulshada si ay u gaaraan danahooda gaar ah sida doonitaanka Xil laga dhaxlo Maal ama Maamuuska Maangaabku u hayo kan noloshiisa silicsanaanta baday .
Dhaqanka Soomaalida ka hor inta aan la baran dawlad dhulka Soomaalida waxaa jiray in Yididiilada beenta ah iyo Balaayo ku baraarujinta uu qaabilsanaa Oday dhaqameedku , Waayadan dambe waxaa ku soo darsamay oo Bulshada dhanka noloshooda isbadalkeeda tilmaamay Siyaasiga , waxa uu ugu yeeraa dadka QABYAALADA oo ku dhisan isnacbaan iyo Isdagaalid
Baaqa balaysan iyo xumo ku hogaamintu waxay samaysay bulsho garasho gaab ah oo hab fakar liita wacyi hooseeyana ku nool , akhlaaq xun oo jecel ekeekanka iyo ilaaqda , dagaal badan oo isdilka u hamuun qaba .
Intaas ayuu ku dhiira galiyaa siyaasigu bulshada , si cad umagu sheego , oo wax uu kula hadlaa afka Qabyaalada oo ah kay garanayaan una jeel baqaan , Qabyaalad ku hayntaas iyo horu sii wadkeeda siyaasigu sido ayaa samaynaysa bulshada qaabka daran ee qalafsan .
Siyaasiga oo ka faa’iidaysanaaya Bulshadaas liidata , Mala Qabyaaladu u adeegiduna dhab ka tahayba oo wax qalbiga kaga xardhan ay tahay oo uu u daacad yahay . ayaa tusinaaya rajo aan la gaarin dadka , Rajadaas aaan Imaan ayaa ah Yididiilo Been ah Aqriye ,iyaguna (Dadku ) way ku aamin qabaan hogaankooda siyaasadeed ee qabyaalada ay aaminsan yihiini usoo xirxirtay .
Bulshadu eed ma leh oo waxay hidaysanaaya wixi horeeyey , hataana la sii haysto , waxaase leh xuma oo dusha saaranaaya Hogaamiyayaasha xumaantaas faafinaaya ee midba kii ka horeeyey dariiqiisi qaaday .
Isbadal Soomaalida ku dhaca si u fakarkooda iyo wacyi nololeedkooda waxay u hoos fadhiyaan siyaasiyiin ka duwan kuwo hore , dunida maan-xirnaanshahana ka kaxeeya dadka oo u fura waa hor leh jiilasha soo aadan si aysan u daba haysan sooyaalka xumaantu ku xardhan tahay iyo aaminaadan Aduun iyo aakhiroba u xun .
Ugu dambayn Yididiilada beenta ahi waa tan ay la nool yihiin malaayiinka Soomaaliyeed ee kala hoos fadhiya siyaasiyiinta kala soohdimeeyey dhulka ee dawladnimada iyo qabyaalada is dhex qaadsiiyeey , iyagu nool nolol damiir lawayaasha dadnimada ka liitaa ay noolaadaan ee ah dadka aad hogaanka siyaasiga ah u tahay xumo ku hogaami oo wax aan dantooda ahayn ugu baaq samayntiisa , ha ku noolaadaan nolol tan ugu hoosaysa adiguna dharag-sanoow ,
Malaha xayawaankaba kooda hogaamiyaa kuma daawado maxasta nolol mabacaysan oo waa arxan dhamaa siyaasiga Soomaaliyeed !
Dooxajoog5@gmail.com Facebook: Halkaan Riix Bog qoraalleed :Idirism
VIDEO:- Ciidanka Mareykanka oo Gacmahooda Ku Burburinaya Saldhigyadooda Afghanistan 13 sano ka dib!.
Muuqaal ay baahisay wakaaladda Wararka Faransiiska ayaa muujinayay ciidanka Mareykanka oo dhulka dhigaya qeybta raashinka iyo hoyga Bagraam iyagoo qorshaynaya in bilaha soo socda ay isaga baxaan saldhigga.
Gobollo kale oo Afghanistan katirsan ayay ciidanka Mareykanku si buuxda uga guureen waxaana deegaanada ay ka baxeen lawareegay ciidamada mujaahidiinta Daalibaan.
Hoos Ka Daawo Muuqaal muujinaya ciidanka Mareykanka oo burburinaya Saldhigyadooda.
SAWIRO:-Cabdulqaadir Siidii ‘Gudoomiyaha Gobolka Shabeelaada hoose’ iyo Calanka Itoobiya
“Waa tuu dareersaday fircoon diracyadiiniiye Waa tuu diyaar ugu akhriyey diinta gaalada e
Dabci beenna weeyaan waxaad nagu dayeysaane Waa waxa dariiqii sharciga uga dilowteene
Dowgii Rasuulkiina waad daba martayseene (scw)” Sayid Maxamed Cabdille Xasan,AUN.